jeudi, 29 juillet 2021 22:40
Kardinaly Désiré Tsarahazana : “Tsy manao politika ary tsy manana kandidà hatolotra ho Praiminisitra ny Fiangonana Katolika”
Nisy ny dinidinika nifanaovan'ireo solontenan'ny Fiangonana Katolika, izay notarihin'ny Kardinaly Désiré Tsarahazana, tamin'ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, androany teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha, manoloana ny toe-draharaha misy eto amin'ny Firenena.
jeudi, 22 juillet 2021 16:15
Fikasana hamono ny filoham-pirenena : Manao ranolava ny fanehoan-kevitra
Nanao fanambarana, tety amin’ny birao fiasany Anosy, ny Tonia Mpampanoa Lalàna eo anivon’ny Fitsarana ambony eto Antananarivo Razafiarivony Berthine, omaly hariva, fa misy olona maromaro nosamborina ny talata 20 Jolay 2021.
lundi, 28 juin 2021 20:19
Kianja Barea : Tany Alexandrie Egypta nandritra ny CAN 2019 no nampitsiry ny eritreritra
Kianja Barea Mahamasina. Fotodrafitrasa ara-panatanjahantena iray miezinezina eto Antananarivo Renivohitra io. Eo andalam-pamitana ny asa ankehitriny, saingy efa afaka nampiantrano ny lanonam-panjakana nankalazana ny tsingerintaona faha-61 taona niverenan’ny fahaleovantenam-pirenena, sady faha-61 taona nijoroan’ny Foloalindahy Malagasy.
Haja kidnapping : Nanjavona tsy voaloa vola ny fiara
Tranombarotra lehibe mpivarotra fiarakodia no nakan'i Manantena Hajanirina Dinah antsoin’ny namany koa hoe : Haja Dinah na i Haja.
jeudi, 10 juin 2021 18:01
Atidohan’ny « Kidnapping » : Nafahan’ny Fitsarana noho ny fisalasalana i Haja Dinah
Toy ny vara-datsaka no nandrenesan’ny maro, indrindra ny fianakavian’ireo niharam-pahavoazana amin’ny fakana an-keriny, fa nafahan’ny Fitsarana noho ny fisalasalana i Manantena Hajanirina Dinah, antsoin’ny namany koa hoe : Haja Dinah na i Haja.
mercredi, 02 juin 2021 20:00
Fiadidian'ny Repoblika : Rtoa Rajoelisoa Soatiana indray hiandraikitra ny Serasera
« Voaantso amin'ny andraikitra hafa ny tenako ato anaty fitondram-panjakana fa natolotra an-dRamatoa Soatiana Rajoelisoa ny fitantanana ny serasera eo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika », hoy Rtoa Rinah Rakotomanga nizara vaovao tao amin’ny pejiny facebook io hariva io.